Ithegi: uhlalutyo lweendaba ezentlalo | Martech Zone
Ithegi: uhlalutyo lweendaba zosasazo
Iinkqubo ezinkulu zosasazo lwentlalo ziqala ngomxholo omfutshane omfutshane onokuwukhupha kuwo onke amajelo akho kwaye ufumane wonke umntu kwinkampani yakho ukuba andise. Kulula ukuyenza kube kanye, kabini, nokuba kathathu. Kodwa ngamakhulu amawaka? Kulapho ke ubukrelekrele boluntu obungelolokwenyani bukunika amandla okuguqula nawuphi na umxholo wexesha elide ube yimikhosi yezithuba zemidiya yoluntu ukukala iinkqubo zakho zemidiya. Mva nje iqonga lobukrelekrele boluntu ekuhlaleni libandakanya umxholo we-AI
Yintoni ukuJongwa kweMidiya yoLuntu? Yonke into kufuneka uyazi!
Mhlawumbi kuya kufuneka siqale ngesizathu. Ngamanye amaxesha sixoxa ngokujonga imidiya yoluntu kunye nabathengi, kwaye bathi abekho kwimidiya yoluntu ukuze bangakhathazeki ngayo. Kulungile… ayilunganga le nto ngoba nangona uphawu lwakho lungathathi nxaxheba kwiincoko zentlalo, oko akuthethi ukuba abathengi bakho kunye nabathengi bangathathi nxaxheba. Kutheni kufuneka ujonge imithombo yeendaba yeNtlalo Umthengi okhathazekileyo uxoxa ngokudana kwabo kwi-Intanethi. Iarhente yethu yayinothethathethwano olunzima kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo